Xukuumada Oo Gaashaanka Ku Dhufatay In Ardayda Deeqda Waxbarasho Ka Helay Turkigu Ay Ku Dhoofaan Baasaaboorka Somalia Iyo Wasiirka Waxbarashada Oo Ka Hadashay | Somaliland Hargeisa City
Wasiirka Waxbarashadda Somaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo aanu khadka Tilifoonka kula xidhiidhnay, isla markaana wax kaga waydiinay waxa ka jira khilaafkaasi, ayaa Haatuf u xaqiijisay in arinta Bassabort-ka ay ardaydu ku dhoofayaan la isku qabtay, balse xukuumad ahaan ay go’aansadeen haddii Bassabort-ka Somaliland laga diido inay ardaydaasi iska joogi doonaan oo aanay Bassaborka Somalia ku dhoofi doonin.
Ugu horayna Marwo Samsam Cabdi Aadan oo ka hadlaysa arintaas ayaa waxa ay tidhi “Qolada Turkiga ah ee hawsha waday waxay yidhaahdeen waxaanaan garanayn waxa aanu Xamar kala kulmi doono, markaasaanu nidhi noo soo celiya caruurta haddii ay noqoto inay Baasaaboorka Somalia ku baxaan. Madaxwaynuhu waxa uu yidhi ha la mariyo Dubai anakaa Tikidhada bixinaynee, taasna Fiisihii oo aan halkaa lagu diyaarin ayaan suurta gal ka dhigayn, waayo safaarad ayaa Xamar shaw u joogta Turkiga mabaan ogayn aniguye. Markaa waxay nagu yidhaahdeen diyaarad wayn oo Turki Airlane ah ayaa ka qaadaysa Xamar oo aanu kuraasi uga banaynay oo ay Taraansit ku noqonayaan, markaa waxa aanu ku nidhi haddii aanay Caruurtayadu Bassabort-kayaga ku dhoofayn way iska joogayaan”.
Marwo Samsam Cabdi Aadan iyada oo hadalkeeda sii wadata waxay tidhi “Imika qorshahayagu waa in ardayda heshay deeqdaas waxbarasho ay Bassaborka Somaliland ku safraan haddii kale way soo noqonayaan, hadii aad xog dheeraad ah rabtaan waxaad timaadaan Airporta marka aan u qaybinayo Baassaabort-ka Somaliland, qorshaha dawladduna waa in Baassaaboorkeena ay Caruurteena ku guulaysatay deeqaha waxbarasho ay ku safraan”.
Wasiirka Waxbarashada Marwo Samsam mar aanu wax ka waydiinay lacag la sheegay in laga qaaday waalidiinta ardaydaas, waxa ay tidhi “Inkasta oo aanan anigu ogayn markii hore hadana markii la ii sheegay waan joojiyey haba yaraatee cid lacag laga qaadayna ma jirto, laakiin kolay arintaas waa mid aanu baadhi doono cida tidhi iyo haday jirto cid laga qaaday lacag aanaan ogaynba oo aan runtii qorshaha noogu jirin”.
Samsam Cabdi Aadan mar ay ka hadlaysay sidda uu u dhacay Imtixaankii laga qaaday ardayda deeqda waxbarasho ka helay Turkiga, Masar iyo Suudaan, waxay tidhi “Dhamaan Ardaydii u fadhiisatay Imtixaankan natiijadiisa aanu soo saarnay ee deeqaha waxbarasho ee aynu ka helnay Turkiga, Masar iyo Suudaan waxa uu u dhacay si cadaalad ah, Isla markaana ardaydii ka qayb gashay kuwa helay iyo kuwa waayeyba way ogyihiin in si cadaalad ah loogu garsooray”.
Dhinaca kale mar aanu la xidhiidhnay Guddoomiyaha Imtixaanaadka Qaranka Daa’uud Axmed Faarax si aanu wax uga ogaano lacagta la sheegay in Waalidiinta ardaydaasi u baxaysay Turkiga la waydiiyey ayaa waxa uu Haatuf u sheegay in markii Arinkaa ay ka war heleen ay joojiyeen.
ka soo xigtay : Haatuf
« Somaliland Delegation to Visit Mogadishu in Historic Trip. (VOA)
Tacsi dadkii ku naf waayey masiibadii dooha Agabar 27 Sep 2011 »